စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ - Bago Regional Government
Home / စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန၊ စက်မှုစစ်ဆေးရေးဌာန၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန၊ ဘဏ္ဏာရေးဌာန၊ အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာနနှင့် လျှပ်စစ် စစ်ဆေးရေးဌာနဟူ၍ ဌာန(၈)ခုဖြင့် ပါ၀င်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဌာနအသီးသီးမှ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ စစ်ဆေးရေးတာ၀န်များ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ရသော ဦးစီးဌာနဖြစ်ပါသည်။
စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနသည် စက်မှုဇုန်များ၏ စက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ လုပ်ငန်း အလိုက်နေရာချထားမှု စက်မှုမှတ်ပုံတင်ထားမှုနှင့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ထုတ်လုပ်မှုများအား ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စက်မှု၀န်ကြီးဌာနက အချိန် အခါအလိုက် ထုတ်ပြန်သည့် လမ်းညွှန်မှာကြားချက်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စက်မှုဇုန်များ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်း များ ၊ နိုင်ငံခြားသားလုပ်ငန်း ရှင်များတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသည့်အစည်းအဝေးများ၊ ဌာနအတွင်း အစည်း အဝေးများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် လေ့လာ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဒေသအလိုက် စက်မှုလုပ်ငန်းထူထောင်နိုင်ရန် ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ရုံး လွှတ်တော်တို့မှ မေးမြန်းချက်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်း၍ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြန်လည်တင်ပြနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများထူထောင်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိကစက်မှု လုပ်ငန်းများ၊ အခြေခံမူများနှင့်အညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း ဥပဒေပုဒ်မ (၁၄)ပါ လုပ်ငန်းရှင်များ၏ လိုအပ်ချက်များအား သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း ပေးခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် ပါသည်။
နိုင်ငံတော်ငြိမ်၀ပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့မှ ၂၆ . ၁၁ . ၁၉၉၀ ရက်နေ့တွင် ဥပဒေအမှတ် (၂၂/၉၀) ဖြင့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း ဥပဒေကိုပြဌာန်းခဲ့ပြီး အမှတ်(၁)စက်မှု၀န်ကြီးဌာနမှ ( ၁.၂.၁၉၉၁ ) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ( ၂၃ / ၉၁ ) ဖြင့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါသည်။
ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေပုဒ် ( ၄ )တွင် မြင်းကောင်ရေ ( ၃) ကောင်အားနှင့် အထက်ရှိ သောအားတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ဖြစ်စေ၊ လုပ်ခစားအလုပ်သမား(၁၀)ဦးနှင့် အထက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ၊ အဆောက်အအုံတစ်ခုခုတွင် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းမှ ကုန်ချောပစ္စည်းထုတ်လုပ်သော ပုဂ္ဂလိကစက်မှု လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုသူသည် ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ရမည်ဟု ပြဌာန်းထားပါသည်။ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေနှင့် အကျုံး၀င်သော ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများအား ဥပဒေလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနသည် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ မြို့နယ်အလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသော ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်းပြုစုခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် / မြို့နယ်အလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စာရင်းပြုစုခြင်း ၊ ဒေသတွင်းရှိ ( Institution , Center, Vocational Training )များနှင့် ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ၊ ဖုန်း ၊ အီးမေး(လ်)၊ ဖက်(စ်) များပြုစုခြင်းနှင့် Institution များတွင်သင်ကြား သည့် ဘာသာရပ်များအားပြုစုခြင်း၊ ဒေသ၏အဓိကထွက် ကုန်များနှင့် လုပ်ငန်းအလိုက် စက်မှုကဏ္ဍ စာရင်းများပြုစုခြင်း ၊ ဒေသအတွင်းထူးခြားသည့်၀န်ဆောင်မှု (Service) လုပ်ငန်းများနှင့် လက်မှု လုပ်ငန်း(Handicraft)များ စာရင်းပြုစုခြင်း၊ ဌာနသို့လာရောက် မေးမြန်း သည့် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ မေးမြန်းချက်များ ဖြေကြားနိုင်ရေးအတွက် သတင်းအချက်အလက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များအား စုစည်းခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း၊ ဒေသထွက်ကုန်များနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏ စျေးကွက်အခြေ အနေ ( ပြည်တွင်း / ပြည်ပ ) များ၊ SME ချေးငွေရရှိရေး စသည်တို့ကို စီမံဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီး အတွက် ခွဲဝေသတ်မှတ်ထားသည့် ချေးငွေပမာဏကျပ်သိန်း(၁၀၀၀၀)အတွက် SME လုပ်ငန်းရှင်များ ကို ချေးငွေရရှိရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ချေးငွေရရှိသူ လုပ်ငန်းရှင် ( ၅၀ ) ဦးအား SMIDB Bank မှ ငွေကျပ်သိန်း ( ၉၁၈၀ ) ကို ထုတ်ချေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည် ။ ကျန်ချေးငွေများကို လုပ်ငန်းရှင် များအား ဆက်လက်ချေးယူနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အတိုင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်၍ SMIDB Bank တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ အခါအားလျော်စွာ ဖွင့်လှစ်သော ပြည်တွင်း/ပြည်ပ သင်တန်းများ၊ Seminor ၊ Work Shop များသို့ SME လုပ်ငန်းရှင်များတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင် ရွက်ပေးရပါသည်။
ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာနသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ(၁၄)ရက်နေ့၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ်(၃၉)ဖြင့် ပြဌာန်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ဘွိုင်လာဥပဒေ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ညွှန်ကြားချက် များနှင့်အညီ ဘွိုင်လာများသက်တမ်းရှည်ကြာစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေး၊ မတော်တဆ ထိခိုက်မှု မဖြစ်ပွားစေရေးတို့ အတွက်စစ်ဆေးလျှက် ဘွိုင်လာများ ကိုမှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊ အသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာန(ရုံးချုပ်)၌ ဖွင့်လှစ်သော ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်သူများ ပညာပေး သင်တန်းသို့လည်း စိတ်ဝင်စားသူများတက်ရောက် နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရပါသည်။
လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ(၂၇)ရက်နေ့ ၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်(၄၄)ဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ပြဌာန်းထုတ်ပြန်ခဲ့သောလျှပ်စစ်ဥပဒေနှင့်အညီ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပို့လွှတ်ခြင်း ၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် လည်းကောင်း ၊ ယင်းလုပ်ငန်းများကို လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လျှပ်စစ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်လည်းကောင်း၊ စစ်ဆေးပြီး ခွင့်ပြု့မိန့်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် အရေးပေါ် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဓါတ်လိုက်မှုများစစ်ဆေးခြင်း ၊ လျှပ်စစ် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ စစ်ဆေးထုတ်ပေးခြင်း တို့ကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။ လျှပ်စစ် စစ်ဆေးရေးဌာန(ရုံးချုပ်)၌ အခါအားလျော်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်သော လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သင်တန်း သို့လည်း စိတ်ဝင်စားသူများတက်ရောက်နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရပါသည်။